Anyị na-agba Isabel Coixet ajụjụ ọnụ banyere ihe nkiri ya The Library | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Carmen Guillen | | Ajụjụ ọnụ
Taa, anyị nwere ohere ikori na Isabel Coixett, onye nduzi ihe nkiri ndi anyi nwere ike gbaa ajuju na oge ihe nkiri ohuru ya "Thelọ ahịa akwụkwọ", nke dabeere n'akwụkwọ nke Penelope Fitzgerald. Anyị hapụụrụ gị n'okwu ya ma chetara gị na enwere ike ịhụ nnukwu ihe nkiri a na sinima ebe ọ bụ na Nọvemba 3 gara aga, ụbọchị nke izizi ya.
Akwụkwọ akụkọ: Ehihie ọma Isabel, kedu ka ị mere? Nke mbu, daalụ maka ajụjụ ọnụ a maka ebe nrụọrụ weebụ Actualidad Literatura, na n'onwe gị, na-agwa gị na enwere m nnukwu obi ụtọ ịbụ onye m ga-emere gị, ebe m na-eso ọrụ gị ruo ọtụtụ afọ na fim gị bụ otu N'ime ihe ole na ole m nwere ike ịhụ otu ugboro na agaghị ada mbà. Kedu ihe dọtara uche gị n'akwụkwọ a "The Bookshop" ("Thelọ ahịa akwụkwọ") nke Penelope Fitzgerald ikwu na m chọrọ ịme ihe nkiri nke a?
Isabel Coixett: Ọ dị m ka ọ bụ akwụkwọ nke nihilism dị egwu, nke nwere ọgụgụ isi dị ukwuu, nwere agwa m na-amata ọtụtụ, nke bụ Florence Green, onye na-akwado ya. Ọ dịkwa m ka akụkọ ọ bụla, ọ bụ ezie na o doro anya na ọ pere mpe, nwere nsonaazụ ụwa niile nke masịrị m ma nwee mmasị na m.
Ndị: Dịka m gụrụla na dịka ị ka kwuchara onwe gị, ị nwere nhọrọ maka isi okwu nke akwụkwọ akụkọ ahụ, Florence Green, ruo n'ókè nke inwe mmetụta dị ukwuu na ya karịa mgbe ọ bụla ọzọ gị na onye ọ bụla ọzọ nọ na fim gị ... Gini kpatara? Kedu ihe dị ka Florence Green dị na gịnị ka anyị nwere ike ịnweta site na ahụmịhe ya?
N'ala: Ọfọn, n'ihi na ọ bụ onye aka ya dị ọcha, onye na-amaghị ihe, onye dị umeala n'obi, onye na-agbanwe agbanwe, onye hụrụ akwụkwọ ya n'anya nke ukwuu na onye kwenyere na ọ ga-eme ihe na ndụ ya,… masịrị m, enwere ihe m ga-amata. Dịka ọmụmaatụ, na ebe ị gara onye na-akwa akwa ma ọ na-agba mbọ na uwe gị. Florence hụrụ na suut ahụ adabaghị na ya, n'agbanyeghị nke ahụ, ọ ga-anagide etu onye na-akwa ya si agwa ya "Bah! Echegbula, ọ dịghị onye ga-achọpụta gị ". Achọrọ m ịtụle obere mkpọmkpọ ebe a kwa ụbọchị, ebe enwere ọtụtụ ndị na-eme ka ndị ọzọ nwee obi ụtọ ...
Ndị: Akwụkwọ Penelope na-ekwu maka ụlọ ahịa akwụkwọ na-ekeghị ihe ọ bụla na gburugburu ezigbo asị. Anyị nwere ike ịsị na n'akụkụ ya, ọ dị ka eziokwu na ụwa nke ndị na-ere akwụkwọ na akwụkwọ n'ozuzu ha bi ugbu a ... you chere na ọganihu nke teknụzụ na ọdịdị nke ederede O nyerela nnukwu aka na obere akwụkwọ ọgụgụ akwụkwọ a ma ọ bụ, n'ụzọ megidere, ị chere na a na-ewepụtarịrị njehie n'ihe gbasara agụmakwụkwọ, ọnụahịa akwụkwọ, na ihe ndị ọzọ nke mere ka ịhụnanya a maka akwụkwọ belata?
N'ala: Pricegwọ akwụkwọ dị m ka ego, n'ihi na ọ bụrụ na ọ dị otu ihe na Spain, ọ bụ ụlọ ahịa akwụkwọ na ọba akwụkwọ ebe ị nwere ike ịgụ ihe ọ bụla ịchọrọ. Onye ọ bụla nke na-agụghị taa bụ maka na ha achọghị. N'ezie, ihe na-adịghị n'ebe ahụ bụ ihe na-akpali ụmụaka iji kpalie ha ịgụ ihe. Agụ di nkpa: ide, ibi ndu ndi ozo, inwe obi uto, imuta ihe, imeghari n’uwa nile ... O di nkpa ka ichoro akwukwo!
Ndị: Kedu ụkpụrụ na ntụgharị uche anyị nwere ike inweta ọtụtụ n'akwụkwọ ahụ "Thelọ ahịa akwụkwọ" dika na ihe nkiri gi, Isabel?
N'ala: Amaghị m ... E wezụga ịme fim ahụ, echere m na ọ bụ oghe nye ọtụtụ nkọwa ... N'ebe ahụ ka onye na-ekiri ya chọrọ inye ya na ihe na-akpali ya.
Ndị: Kedu ihe ị kwadoro nye ndị na - agụ akwụkwọ anyị nke Actualidad Literatura? Guo akwukwo Penelope na mbu wee lelee ihe nkiri ya ka obu ozo?
N'ala: (Chuckling) Amaghim ... Echere m na akwukwo a di ebube, obu ezigbo akwukwo. Echere m na ihe nkiri ahụ dị nro, n'ụzọ ụfọdụ, agbanweela m akụkụ nke akwụkwọ akụkọ ahụ nke siri ike maka onye na-ekiri ihe ilo na ihuenyo ... N'echiche ahụ, agbalịrị m ime ka ọ dị nro ma nye ìhè n'elu niile, n'ihi na dịka m kwuworo, akwụkwọ ahụ bụ nnukwu nihilism. Agbalịrị m na olileanya dị.
Ndị: Na-abanye n'okwu banyere cinematic, kedu ka o si arụ ọrụ na ndị na-eme ihe nkiri dịka Bill Nighy na Patricia Clarkson?
N'ala: Ọfọn Patricia, ọ bụ ihe nkiri nke atọ kemgbe m na-eme ya, ya mere enwere m obi ụtọ. Bill bụkwa onye na-eme ihe nkiri mara mma, Bill bụ ihe ịtụnanya ... Mana hey, onye na-akwado ihe nkiri a bụ Emily Mortimer, onye nọ n’ụgbọ elu niile.
Ndị: N'izo aka na ya: Gini mere iji kpebie ịhapụ Emily Mortimer ka o buru aha nke Florence na ihe nkiri gi? Gịnị kpaliri mmasị gị banyere ya iji kpebie ọrụ gị na mmegharị ihe nkiri a, Isabel?
N'ala: Ọ bụ onye na-eme ihe nkiri na mgbe ọ bụla m hụrụ ya na fim na usoro, echere m na o nwere ihe ... Enwere ihe ebe ahụ nke na-emeghị ka ọ bụrụ onye protagonist. Echere m na ọ nwere ike ịbụ akwụkwọ akụkọ a.
Ndị: N'ikpeazụ, achọghị m iji oge gị na mmesapụ aka gị mee ihe: Ọ bụrụ na ị ga-edekọ akụkọ banyere otu fim gị, gịnị ga-abụ?
N'ala: Ha niile nwere ihe… Na-amasị m nke ọ bụla maka ihe dị iche iche. Enwere m ọtụtụ ịhụnanya maka "Ihe m na-agwaghị gị", n’ihi na ọ bụ ihe nkiri emere ka nke a site na "Thelọ ahịa akwụkwọ"Site na mkpa na mkpa, ọ dịghị onye ghọtara ihe mere m ji mee ya, ọ dị ụdị mgbagwoju anya… Ma n'otu oge ahụ ọ dị mma ịmechaa ya ma yikwasị ya dịka m chọrọ.
Ndị: Kedu akwụkwọ akwụkwọ Isabel Coixet kachasị amasị?
N'ala: Ajuju a siri ike… Enwere otutu akwukwo. Ikekwe "Red na Black" Stendhal bụ akwụkwọ m na-agaghachi mgbe niile, ọ dị m mma n'anya.
Ọzọkwa, daalụ maka oge gị Isabel ... Daalụ site na ndị otu niile na-ejikwa Actualidad Literatura. Kasị mma na fim a ma nwee ike ịga nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Ajụjụ ọnụ Isabel Coixet nwere maka ihe nkiri ọhụụ ya bụ "The Library" nke dabeere n'akwụkwọ ahụ Penelope Fitzgerald dere
Fọdụ ndị edemede si n’otu ebe dị na La Mancha kpọrọ La Solana